डोनाल्ड ट्रम्प बारे अमेरिकी मतदाताहरुलाइ निक्सको खुला पत्र ! | सिमान्तMarginal डोनाल्ड ट्रम्प बारे अमेरिकी मतदाताहरुलाइ निक्सको खुला पत्र ! – सिमान्तMarginal
Posted on3Mar 2016 10 Mar 2016 by Jesi for INCOMESCO
केही दिन अघि हफिङ्टन पोष्टमा एकजना नागरिक पत्रकार जेरेमी निक्सको पोस्ट पढने मौका मिल्यो । ”मेरा मित्रहरु जसले डोनाल्ड ट्रम्पलाई समर्थन गर्छन, तिनैलाई एउटा खुला पत्र” शिर्षकमा पोखिएका निक्सका बिचारहरु अमेरिकि राष्ट्रपतिहरुले लिँदै आएका बिचारभन्दा साँचै नै उच्च लाग्थ्यो । पत्रको रुपमा लेखिएको यो लेखमा प्रत्येक अमेरिकिहरुका लागि एउटा सन्देश छ । मनै छुने यो पत्र प्रेरणादायि त छ नै दायित्व बोध पनि छ; अमेरिकनहरुका लागि भने ठुलो पाठ हो ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव नजिकै जाँदा तीन जनाको नाम अग्रस्थानमा सर्दै आएको छ । डेमोक्र्याटका बर्नी सान्डर्स र हिलारी क्लिण्टन र रिपब्लिकनका एक्का डोनाल्ड ट्रम्प । अहिले यिनिहरु पार्टी भित्रबाट को छनिने भनेर प्रतिस्पर्धा गर्दै छन ।
उल्लेखित तिनजना मध्ये छ दशक उमेर पार गरीसकेका समाजवादी नेता बर्नी सान्डर्स आफ्नो इमान्दार छविका कारण कल्पना गरेभन्दा बाहिरबाट रातारात हिलारी क्लिण्टनलाई आत्थुआत्थु पार्दै अगाडि बढीरहेका थिए । सान्डर्सलाई अमेरिकी जनताहरुले प्रजातान्त्रिक समाजवादी इमान्दार नेता, निम्न सामाजिक-आर्थिक अवस्था भएको समाजको प्रतिनिधिका रुपमा हेरेका छन । यी बॢद्ध नेताका अधिकांश समर्थकमा युवाहरु छन भने यिनको आक्रमणमा त्यहाँको लुच्चो राजनीति र धनीहरु परेका छन । अहिले आएर साण्डर्सलाई क्लिण्टनले १२ ठाउँँमा उछिनेको अवस्था छ । त्यसैगरी रिपब्लिकनबाट जित्नेमा ट्रम्प निकै अगाडि छन ।
अब लगभग पक्का भएको छ कि यदि रिपब्लिकन पार्टिले ट्रम्पका बिरुद्ध कुनै अप्रत्यासित निर्णय लिएन भने अन्तिम चुनाव क्लिण्टन र ट्रम्पको बिचमा हुनेछ । अति धनी एक प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गरिरहेका धनाड्य डोनाल्ड ट्रम्पलाई छाडेर धनीहरुलाई बिशेष कर लगाउनु पर्छ भन्ने सान्डर्सको पक्षमा जित सुनिस्चित गर्न चलखेल होला भनेर कल्पना गर्न सकिन्न । अर्थात अहिले लाभ लिईरहेका धनीहरुले आफ्नो पहुँचलाई ट्रम्पकै पक्षमा लगाउने छन । धनीहरुलाई थप कर लगाएर १० बर्षमा ५०० बिलियन डलर संकलन गर्ने कुरा हिलारी क्लिण्टनको प्रस्तावमा उल्लेख छ भने वर्नी साण्डर्सको प्रस्तावमा ५ ट्रिलिओनभन्दा धेरै संकलन गर्ने लक्ष्य छ । क्लिण्टन र साण्डर्स दुवै जना डेमोक्र्याटिक पार्टिका उमेद्वार हुन ।
मुलत: मोनिका लेविन्स्की काण्डमा आफ्ना पति तत्कालिन राष्ट्रपति विल क्लिण्टनलाई बचाएर ठुलो गुन लगाएकी हिलारीलाई जसरी पनि जिताउनु पर्ने रिणको बोझ विल क्लिण्टनमा परेको छ भने यता वर्तमान राष्ट्रपति ओबामा पनि विल क्लिण्टनले आफुलाई राष्ट्रपति बनाउन समर्थन गरेको गुन हिलारीलाई जसरी पनि जिताएर तिर्न चाहन्छन । यसरी विल क्लिण्टन र बाराक ओबामाको समर्थन पनि हिलारी क्लिण्टनलाई नै भएको हुँदा साण्डर्सको बिजय सहज छैन । त्यसैगरि प्रथम अमेरिकि राष्ट्रपति हुन पाउने सौभाग्य पनि जुटेकोले हिलारिको पक्षमा थप प्लस पइन्ट देखिन्छ । जे होस साण्डर्सले एक्लै जसरी ‘समाजवादि लहर’ ल्याउन सफल भए त्यसले अमेरिकि मतदातहरु आर्थिक असमानता प्रति निकै चिन्तित छन भन्ने जनाएको छ ।
डोनाल्ड ट्रम्प निकै चर्को कुरा गरेर मतदाताहरुलाई तानिरहेकाछन । यस क्रममा उनी निकै बिवादास्पद देखिएका छन तर पनि ”सफा दिलका” कहलाईएका छन । उनका बिरोधिहरुले अब्र्हाम लिंकनको पद चिन्ह मास्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन र यिनिहरुको प्रतिप्रश्न के छ भने यदि डोनाल्ड ट्रम्प विश्व (सबै) को नेता बन्न सक्दैनन भने विश्वले अमेरिकालाई किन मान्ने ?!
धेरै उदाहरणहरु दिएर निक्स महोदयले ट्रम्पलाई रेसिष्ट, सेक्सिष्ट, मूर्ख, घमण्डी, बदमाश, अहँकारी, धनको मात भएका आदि भनेर प्रमाणित गर्न खोजेका छन । त्यसका लागि सार्वजनिक कार्यक्रममा ट्रम्पले बोलेका शब्दहरुलाई नै निक्सले प्रमाणका रुपमा पेश गरेका छन । अन्तमा निक्सले संपूर्ण अमेरिकि मतदाताहरुलाई डोनाल्ड ट्रम्प जस्तो स्वाँठलाई मतदान गरेर अमेरिका र अमेरिकिहरुलाई बिगार्ने काम नगर भनेका छन ।
यहाँँनेर एउटा प्रसंग जोडौँ । मलेशियाका पूर्व प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले १८ अक्टोबर २००४ मा द स्टारलाई दिएको अन्तरवार्तामा ततकालिन अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा जर्ज बुशनै निर्वाचित हुने कुराको बिश्लेशण गरेका थिए र भनेका थिए की ‘अमेरिकी जनताहरू विश्वबारे धेरै जान्दैनन तर पनि विश्वको शक्तिशाली मान्छेको छनौट गर्दछन’ । यसरी नै अमेरिकिहरु प्रति अविश्वास नथपियोस भन्ने चिन्ताले जेरेमी निक्सलाई ग्रस्त पारेको देखियो । ‘धार्मिक र डेमोक्र्याटहरुलाई मन नपरेकै कारण डोनाल्ड ट्रम्पलाई समर्थन गरिएको हो भने त्यो ठुलो भुल हुने’ कुराको दावी समेत गरेका छन; निक्सले ।
हुन त अमेरिकि राष्ट्रपतिहरु चाहेको काम गर्न सक्दैनन भन्ने कुराको प्रमाण स्वयं बाराक ओबामा पनि हुन । किनभने उनले ल्याएका ओबामा केयर प्लान, गन ल, र ग्वाण्टानामो बेबाट बन्दिहरु हटाउने कुराको घोषणा गर्दागर्दै दोश्रो चार बर्षे कार्यकाल पनि सकेर उनी अवकास हुँदैछन । ओबामा केयर प्लान र गन ल का बारेमा उनले कति आँटा बेल्न परिरहेको छ, कति पटक आँशु खसाले भन्ने कुरा अमेरिकि जनताले नबुझेका होइनन ।
निक्सले भने झैँ विश्वलाई नै एउटा यस्तो नेता चाहिएको छ जो सबैको हुन सकोस, उसलाई सबैले स्विकार गर्न सकुन । जसले बिवेकको प्रयोग गरेर नेत्रित्व दिन सकोस न कि बन्दुक, पैसा र धम्की दिएर । यस्तो नेत्रित्व वास्तवमै चिरस्थायी हुन्छ, त्यो नै अमेरिकिहरुको हितमा हुन्छ । एक पटक मध्ये पूर्व र सिरियाको प्रसंगलाई लिएर वेलायती लेवर पार्टिका वर्तमान नेता जेरेमी कर्विनले भनेका थिए- ‘सुरक्षा भनेको ‘विश्वाश’ हो; यदि सकारात्मक विश्वास जित्न सकियो भने त्यसले कैयौँ गुणा सुरक्षाको प्रत्याभुती दिन सक्छ ।’ तर अहिले सर्वत्र अविश्वास छ ।
अन्तमा; वास्तवमा अमेरिकि राष्ट्रपतिका रिपब्लिकन उम्मेद्वार डोनाल्ड ट्रम्प्ले जे भन्दैछन त्यो नौलो कुरामा होइन; जे हुर्काइेको थियो त्यसैलाइ सम्बोधन मात्र गरेका हुन ! त्यसमा हिलारी क्लिण्टनले बिदेश सेक्रेटरी भएर गरेका कामहरु पनि पर्दछन । फरक केवल बोलेर र नबोलेर गर्ने मात्र हो । त्यसैले साण्डर्सहरुका लागि त्यती सजिलो छैन ।
Previous Postने का सभापति: शशांकलाई अघि बढ्न दबाबNext Postढोङ